Abu Bakar al-Baagdadii: Paantiin dursaa garee IS 'qorannoo DNA'f hatame - BBC News Afaan Oromoo
Abu Bakar al-Baagdadii: Paantiin dursaa garee IS 'qorannoo DNA'f hatame
Abu Bakar al-Baagdadii: Paantiin dursaa garee IS 'qorannoo DNAf hatame
Gareen Humna Dimokiraatawaa Sooriyaa Kurdootaan (SDF) durfamu akka jedhetti basaastonni uffata jalaa (paantii) eenyummaa Abu Bakar al-Baagdadii ittiin mirkaneeffatan hataniiru.
Paantiin hatame kun qorannoo DNA'f gargaareera.
Komaaddarri Ol-aanaa SDF Poolaat Kaan maddi isaan fayyadamanis osoo humna addaa US kan Sooriya jiru kun oppereeshinii hin jalqabiin bakka dursaan garee IS kun jiru eessa akka ta'u adda baafachuudhaaf ga'ee guddaa taphateera.
Abu Bakar al-Baagdadii yeroo isa qabuuf itti marsanitti ofiin of ajjeeseera.
Pirezedaantiin US Doonaald Tiraamp ammoo ga'ee humnoota warra Kurdootaa gadi xiqqeessee ilaaleera.
Itti deemanii qabuu kana gaafa Onkoloolessa 27 yeroo beeksisanitti, Obbo Tiraamp warri Kurdootaa odeeffannoo "gargaaru" kennaniiru garuu ammoo tarkaanfii fudhachuu keessatti "ga'ee loltummaa tasuma bahatan hin jiru," jedhan.
Ameerikaan barbaacha ilma Bin Laadeniif $1m ramadde
Obbo Kaan ammoo SDF itti duulanii qabuu keessatti ga'ee barbaachisaa taphateera jechuudhaan Wixata tiwiitera isaaniirratti barreessaniiru.
"Hojiin intelijensiifi al-Bagdaadiin argachuu akkasumas bakka inni jiru adda baafachuun hundi isaa bu'aa hojii keenyaati.
Maddi intelijensii keenyaa qindoominaafi qajeelfama haleellaa xiyyaaraan gaggeefamee hanga daqiiqaa dhumaatti keessatti hirmaachuun milkaa'ina oppereeshinii ture sanaaf tumsaniiru," jedhan.
Obbo Kaan itti dabaluudhaan, SDF dhaabbata basaasaa Ameerikaa CIA waliin ta'uudhaan Caamsaa 15 irraa kaasuun bakka Abu Bakar al-Baagdadiin jiru faana dha'aa turan.
Faana dha'uu kanaan boodas al-Baagdadiin bakka Idliib jedhamu dhumarratti itti marfame dhokatee ture.
Maddeen Obbo Kaaniin eeruun akka gabaasanitti, gaggeessaan IS kun gara bakka haaraa Jaraabluus jedhamutti deemuuf akka turedha.
Gareen SDF michuu US cima turan, keessumaa waraana garee IS waliin gaggeeffamu keessatti. Haata'u malee, jalqaba ji'a kanaarra Obbo Tiraamp, loltoota Ameerikaa Sooriyaa kaabaa keessaa baaseera.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti, US loltuu baasuun ishee Tarkiin haleellaa naannoo daangaa isherratti akka jalqabduuf kan karaa baneefidha.
Itoophiyaan daangaa irratti miseensota garee IS to'annoo jala oolchuu beeksiste
Bin Laaden: US barbaacha ilma Osaamaa, Hamzaa qabee fiduuf badhaasa qopheessite
1 Bitooteessa 2019